ကားတစ်စီးပါဝါအင်ဗာ 12V1000W Sine Wave ကိုအင်ဗာစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းပြင်ဆင်ထားသော | Ligao
အလိုအလျောက် 12V 20A 8 အဆင့်မော်တော်ကားဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာအားသွင်း
အလိုအလျောက် 12V 10A7အဆင့်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာအားသွင်း
ကားတစ်စီးပါဝါအင်ဗာ 12V1000W Sine Wave ကိုအင်ဗာပြင်ဆင်ထားသော
မြို့ရိုးကိုအလိုအလျောက်ဗို့အား Regulator WSD-3000VA တပ်ဆင်ထား
12V ပါဝါ Converter 20Amp မှ DC က, DC Converter 24V
·ကားလှေ, ထရပ်ကားများ, အမြည်းနှင့်မိုဘိုင်းနေအိမ်များအတွက်အသုံးပြုမှုသည်။
·ခရီးဆောင်မှပါဝါအင်ဗာတာကို ယူ. မီးခွက်, ရေဒီယိုသို့မဟုတ်တီဗီကို run ဖို့အာဏာကိုရ။
·ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်အဖြစ်အရေးပေါ်မှာတော့သင့်ကားဘက်ထရီသို့မဟုတ်ခရီးဆောင်ဘက်ထရီမှပါဝါအင်ဗာတာ attach နှင့်သင့်ကရိယာကို run ဖို့အာဏာကိုရ။
·က Ultra-Compact သတ္တုအိမ်ရာ: အသေးစားနှင့်ကြမ်းတမ်း: မည်သည့် tool ကို box ကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးသို့မဟုတ်လက်အိတ်အခန်းများတွင်လွယ်ကူစွာသိမ်းဆည်းထား။
·ပေါင်းစည်းဖျူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: Overload ထွက်ပေါက်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှသင်၏ဘက်ထရီနှင့်အာဏာအင်ဗာတာကအကာအကွယ်ပေးတယ်။ ·အဆိုပါအင်ဗာတာကိုအလိုအလျောက်ဘက်ထရီကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အနိမ့်ဘက်ထရီဗို့အားရှာဖွေပြီးပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်
· Overload ကာကွယ်မှု: (Overload ထွက်ပေါက်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနေဖြင့်ပေါင်းစည်းဖျူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဘက်ထရီကာကွယ်ပေးသည်, တန်ခိုးအင်ဗာတာ) shutdown ချခြင်းနှင့်နှိုးဆော်သံ
· Output တိုတို: Output တိုတောင်း circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း။
·ကိုက်ညီစံချိန်စံညွှန်းများ: သမဝါယမ, အီး, IEC60950, EN61000, 2006/28 / EC
·ဘက်ထရီကာကွယ်မှု reverse: ဖျူးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
· DC က input ကိုဗို့: 12V DC က, 91A, (10-15V)
standby လက်ရှိ· Input အား (+ / 12V DC က - 5%): ≤0.6A
· AC အ output ကိုဗို့: 230V AC / 110V AC အ, +/- 8%
· output power (အထွတ်အထိပ် watts က): 2000W
· Output အကြိမ်ရေ: 50 သို့မဟုတ် 60Hz
· Output waveform: ပြင်ဆင်ထားသော sine လှိုင်း
·အနိမျ့-ဘက်ထရီဗို့နှိုးဆော်သံ: 10.5V, DC + / - 0.5V
·အနိမျ့-ဘက်ထရီဗို့အားပိတ်: 10.0V, DC, +/- 0.5V
·ဖျူးအရေအတွက် & အရွယ်အစား: 20A × 6, စံအော်တိုဓါးဖျူး (ပြည်တွင်း *)
·အသုံး: 85 မှ 90%
· Connection ကို cable ကို: 16.0mm2/ 1100mm ။
·စက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ): 260 × 198 × 70
·ဘ (ကီလို): 2.9Kg
ဌက Ultra-Compact သတ္တုအိမ်ရာ
ဌအနိမျ့-ဘက်ထရီနှိုးစက် / Shutdown
/ ပိတ်ပြောင်းလဲမည်တွင် illuminated ဌ
12V DC ကသို့မဟုတ် 24V DC က၏ဌ Input ကိုဗို့အား Range
115V AC အသို့မဟုတ် 230V AC အများ၏ဌ Output ဗို့အား Range
ကားများ, မိုဘိုင်းအိမ်များ, စခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ဘို့သင့်တော်ဌ
ထုပ်ပိုး: ဆုလက်ဆောင်သေတ္တာများနှင့်ပို့ကုန်စက္ဏူထူ, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအသေးစိတ်ကိုထုပ်ပိုး။
Shippment: 40-45 ရက်အတွင်းသိုက်ပြီးနောက်။
ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များအတွက်ကျော်နှစ် 20 အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Zhongshan တရုတ်နိုင်ငံဌ Professionla စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
LIGAO (ZHONGSHAN) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ CO ။ , LTD မှ အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း 30 ကျော်နှင့်အတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏အရှိဆုံးအထူးပြုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းကို 800 န်ထမ်းများနှင့် 35000 m²ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာနှင့်အတူမင်္ဂလာရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းရန်စီမံခန့်ခွဲ။
ဒီဇိုင်း, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း, ထုတ်လုပ်မှု connectedly ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့စီးဆင်းနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှယုံကြည်မှုအနိုင်ရ။
ISO9001 အားဖြင့်ကောက်ယူ: 2015 နှင့် ul, GS, သမဝါယမ, အီးနှင့် E-အမှတ်အသားခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူရရှိကျနော်တို့တင်သွင်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်လိုင်းများနှင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များအတွက်နည်းပညာစမ်းသပ်သို့ထိရောက်သောရန်ပုံငွေနှင့်စွမ်းအင်မွှုပျနှံအပေါင်းတို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှမြင့်မားသောဂုဏ်သတင်းရရှိသည်။
ယခင်: [Copy] Automatic Voltage Stabilizer – meter display 3000VA
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် 12V 10A7အဆင့်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာအားသွင်း
နေရောင်ခြည်အင်ဗာဟာ Off Grid 5000w
Grid နေရောင်ခြည်အင်ဗာဟာ Off 5kw
DC DC အင်ဗာ
အင်ဗာတာ 12V 220v 2000w
အင်ဗာတာကို Power အင်ဗာတာ
Grid အင်ဗာဟာ Off
Power ကအင်ဗာ 1000w
sine Wave ကိုအင်ဗာ
လူပျိုအဆင့် 220v နေရောင်ခြည် Pump အင်ဗာ
Grid 3kw ဟာ Off နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာ
နေရောင်ခြည်ကို Power အင်ဗာ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Pump အင်ဗာ
ဇယားကွက်ဟာ Off ပါဝါအင်ဗာတာ 12V 5000W Sine ပြင်ဆင်ထားသော ...
Grid off ပါဝါ inverter12V 4000W Sine ပြင်ဆင်ထားသော ...
Grid 12V 3000W ပိတ်ပါဝါကိုအင်ဗာ Sine ပြင်ဆင်ထားသော ...
Power ကအင်ဗာ 2000W12V Sine Wave ကို Inve ပြင်ဆင်ထားသော ...
AC အအင်ဗာ 12V 1500W မှ DC က Sine Wave ကိုပြင်ဆင်ထားသော ...
AC အအင်ဗာ 12V1200W မှ DC က Sine Wave ကိုကို C ပြင်ဆင်ထားသော ...
E-mail ကို: Ligao282@Ligaopower.com